Tani waa hage aad la wadaago sida ugu wanaagsan ee xididka phone Samsung Galaxy Ace S5830 on your computer si degdeg ah oo si fudud. Waxaad ku dhameysan kartaa nidaamka oo dhan ku qasabno yar oo sahlan. Waa hagaag, ka hor inta aanad bilaabin, waxaad u baahan tahay in aad ogaato sharciyada qaar ka mid ah in buugan waxaa kaliya loogu talagalay Samsung Galaxy Ace S5830, afjarno ka tirtiri doonaa damaanad phone oo aad ku socoto taas loo sameeyo halis ugu adiga kuu gaar ah. Waxaad heysano taas, oo markaas ha soo ayaa sii.
Talaabooyinka ee soo afjarno Galaxy Ace S5830
First of dhan, hubi telefoonka iyo in la hubiyo in batteriga aad telefoonka ee ka badan tahay 70% (si buuxda u soo eedeeyay si ka fiican). Markaas download baakadaha ka rooting hoose si aad u computer.
Fiiro gaar ah: Just download baakadaha iyo badbaadin on your computer (meel sahlan loo heli karo). Uma baahnid in aad si ay u siibka.
Tallaabada 1. sahlo debugging USB
Qabo telefoonka oo taga si Dejinta> Codsiyada> Development , calaamadee sanduuqa ka hor Debugging USB haddii aan la hubiyaa. Haddii ay tahay, kaliya waxaa Tagin Anoo Kali ah oo taga si aad tallaabada xigta.
Tallaabada 2. Nuqul baakadaha rooting in aad telefoonka
Next, aad telefoonka ku xiran kombiyuutarka via cable USB ah. Raadi baakadaha rooting in aad hore u soo bixi iyo nuqul in xididka buugga card SD ee ku saabsan telefoonka. Ha nuqul in ay wax fayl kale.
Tallaabada 3. Tag hab telefoonka ee soo kabashada
Marka aad hawsha ay u dhammaystiraan kor ku xusan, barkinta aad telefoon u computer oo awood ka baxsan. Markaas riix Up + Volume Home + Power wada in muddo ah, ilaa aad ka hesho in hab telefoonka ee soo kabashada.
Tallaabada 4. Ku rakib baakadaha ku saabsan telefoonka
On menu hab kabashada ee, waxaa jira xal: Codso update ka kaydinta dibadda. Waxaa Dooro dooro baakadaha ah aad soo guuriyeen in aad telefoon si aad u rakiban.
Tallaabada 5. Root habka hadda
Hadda, waxaa bilaabo socodka ah ee soo afjarno. Just sugto dhowr daqiiqo, iyo in ka dib, waxaa lagu weydiin doonaa in aad reboot telefoonka. Just u oggolaado iyo telefoonka rebooted. Marka rebooting aad telefoonka ee la dhamaystiro, aad wax rooting ah gebi ahaanba ku dhameysatay.
Sida loo dayactir ku Phone jilicsan Bricked Android
> Resource > Talooyin Root > sida ugu wanaagsan ee xididka Samsung Galaxy Ace S5830